Hidhamaan umurii guutuu erga 'yeroof du'ee ka'ee' adabbii koo fixadheera jedhe - BBC News Afaan Oromoo
Hidhamaan umurii guutuu erga 'yeroof du'ee ka'ee' adabbii koo fixadheera jedhe
Goodayyaa suuraa Mana hidhaa Iowa
Namichi lammii US hidhaan umurii guutuu itti murtaa'e tokko wallaansa baqasanii hodhuun yeroo taasifamuuf yeroo muraasaaf onneen isaa dhaabatee waan turteef adabbii hidhaa umurii guutuu koo yeroo sanan xumuradhe jedha.
Wallaansarra yeroo jiru sanatti "yeroo gabaabaadhaaf du'ee waanan tureef" addabbiin hidhaa guutuu koo xumurameera jechuun mana murtiitti himannaa dhiyeeffatus, manni murtii US kun gadi isa dhiisuu dideera.
Namni maqaan isaa Benjaamiin Shiriibeer jedhamu umuriin isaa waggaa 66 ta'e kun bara 1996 IOWa keessatti nama tokko rukkutee waan ajjeeseef hidhaan cimaan umurii guutuu itti murtaa'eera.
Namichi kun akka jedhetti deebiyee lubbuun isaa kaatee jiraachuu danda'ulleen adabbiin hidhaa umurii guutuu kan xumurame yeroo onneen isaa wallaansi onnee waggaa afur taasifamaaf jiruu dhaabbattee turtedha.
Namoonni qaawwa dhumdhuma tokko hin guutne tolfachuun mana hidhaatii miliqan
Namtichi akka dubartiitti uffatee mana hidhaatii miliquuf ture qabame
Dubartiin maqaa balleessuu amantiidhaan duuti itti murtaa'e bilisa baate
Abbootiin seeraa garuu akka jedhanitti himannaan Shiriibeer sirrii ta'ulleen "amansiisaa miti".
Adeemsa wallaansa isaa keessatti ragaalee seeraa ofii isaa waan mallatteesseef "carraan du'uu" isaa kan hin fakkaannedha ture.
Bara 2015 keessa, Shiriibeer dhibeen kalee isa mudatee ture. Yeroo dhibame sanattis hospitaala geeffamuun akka doktoroonni achi keessatti wallaansa lubbuu isaa keessatti eeguu taasifamus boodarra guutummaan guutuutti fayyee mana hidhaasaatti deebiyeera.
Himannaan Shiriibeer bara darbe kan dhiyaate yoo ta'u,lubbuu koo tursiisuun isaanii fedha kootiin ala kan ta'edha jedha.
Kanaafis, yeroo wallaansa naaf taasisanitti yeroo gabaabaaf "du'ee ka'uun koo" addabbiin hidhaa umurii guutuu anarratti darbee ture xumurameera kan jedhu agarsiisa jedhe.
El Chaappoon hidhaa umurii guutuun adabame
Manni murtii garuu himannaa Shiriiber kana kuffiseera.
Manni murtiichaas addabiin hidhaa umurii guutuu hanga qorataan dhimma fayyaa isaa ifatti du'uu isaa hin labsinetti hin xumuramu jedheera.
Kaalifoorniyaatti namoonni qaawwa dhumdhuma tokko hin guutne tolfachuun mana hidhaatii miliqan
Namichi uffata intalasaa uffatee mana hidhaatii miliquuf osoo yaaluu qabame
Dubartiin El Saalvador ulfa baasteen waggaa 15 booda hidhaadhaa baate